WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AXAD 30-KA AGOOSTO 2015-KA
Sunday August 30, 2015 - 10:51:11 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXWEYNAHA SOMALIA IYO WAFDI UU HOGGAAMINAYO OO SHALAY U DHOOFAY IMAARAADKA CARABTA Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu Horkacayo ayaa shalay u dhoofay Dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ka dib martiqaad uu ka helay Amiirka W
MADAXWEYNAHA SOMALIA IYO WAFDI UU HOGGAAMINAYO OO SHALAY U DHOOFAY IMAARAADKA CARABTA Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu Horkacayo ayaa shalay u dhoofay Dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ka dib martiqaad uu ka helay Amiirka Waddankaas. Wafdiga Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ah Mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda; iyadoo Ga roonka diyaaradaha Muqdisho ay ku sii Sagootiyeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Ra'iisul Wasaaraha, Xubno ka tirsan Labada Gole iyo Saraakiil Ciidan.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya, Daa’uud Aweys oo ka War-bixinaya Safarka Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa sheegay inay ku wehliyaan xubno ka tirsan Gola yaasha dowladda Soomaaliya, isla markaana ay Imaaraadka Carabta kala hadli doonaan xiriirka labada dal iyo iskaashiga ka dhexeeya.
"Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa waxay u dhoofeen Imaaraadka Carabta oo ay martiqaad rasmi ah ka heleen; waxaana kulammada ay yeelan doonaan ay kaga hadli doonaan Xiriir iyo iskaashi ka dhaxeeya labada dal,” ayuu yiri Daa’uud Aweys.
Ugu dambeyn, Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulammo la qaadan doona Mas’uuliyiinta dalkaas, iyagoo qodobbada ay kawada hadli doonaan ay Gundhig u yihiin taagee-rida Dowladda Imaaraadku ay siiso Soomaaliya
HAWEENAY XALAY LAGU DILAY MAGAALADA MUQDISHO
Kooxo hubaysan ayaa xalay Degmada Xamar jajab ee Gobolka Banaadir waxa ay ku dileen haweenay Guddoomiye waaxeed ka aheyd Degmada Xamar Jajab.Ragga hubeysan ayaa beegs aday haweenayda, waxaana rasaas ay la dhaceen ay sababtay inuu dhaawac culus soo gaaro haweenaydaasi, iyadoo ugu dambeyn u geeriyootay dhaawicii cuslaa ee soo gaaray.
Siciido Sheekh Mursal, ayaa lagu magacaabi jiray haweenayda Guddoomiye Waaxeedka ka aheyd Degmada Xamar jajab ee xalay fiidkii ragga hubaysan ay rasaasta la dhaceen, kadibna dha awicii soo gaadhay Isbitaalka ugu geeriyootay.
Raggii hubaysnaa ayaa ka baxsaday goobta ay ku beegsadeen haweenaydaasi, iyadoo ay san suuragelin ciidamada ammaanka Degmada Xamar jajab inay soo qabtaan raggii ka dambe eyay dilka haweenaydaasi.
Saraakiil ka tirsan Booliska Degmada Xamar jajab oo xaqiijiyay dhacdadaan, ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan cidii ka dambeysay dilka loo geystay haweenaydaan.
Maamulka Degmada Xamar jajab weli kama aysan hadlin dilkaan loo geystay Haweena ydaan Guddoomiye Waaxeedka ka aheyd Degmada Xamar jajab ee xalay ifka la dhaafiyay.
Ilaa hada ma cadda raggii dilka geystay halka ay ka tirsan yihiin, balse Ururka Al Shabaab ayaa looga bartay dilalka caynkaan oo kale ah inay fuliyaan.
MARTI-GALINTA SHIRKA MAAMULKA HIIRAAN IYO SH. DHEXE OO LA ISKU DIYAARINAYO
Inkastoo ilaa iyo hadda dhab ahaan aan la ogeyn halka rasmiga ah oo uu ka furmi doono shirka dhismahamaamulka gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, ayaa haddana dhanka kale waxaa jira diyaargarow la xiriira martigalinta shirka oo kamuuqanaya magaalada Beledweyne.
Waxaa heer gabagabo ah maraya dhismaha Hool qurux badan oo lagadhisayo gudaha xarunta maamulka gobolka, kaa oo loogu talagalayay in lagu qabto shirarka kala duwan, gaar ahaan shirweynaha dhismaha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, sidda ay HOL u sheegeen xubno ka tirsan maamulka heer degmo.
Mas'uuliyiinta maamulka heer degmo ayaa sheegay in dhismahan yahay dhisme u qalma marti galinta kulamada heerkeedu sareeyo, iyagoo intaa ku darray in maalmaha soo socda xariga ka jiri doono.
Labada magaalo Beledweyne iyo Jowhar ayaa u muuqda kuwo xusul duub ugu jira siddii ay magaalo walba u hanan laheyd marti-galinta shirka dhismaha dowlad gobolleedka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, waloow hadda dhinaca kale marka aad eegto uu dib u dhac ka muuqdo waqtigii ay dowladda u qorsheysa in uu furmo shirka oo ku beegan 01-da September, madaama aan wali lagu guuleysan xitaa in la magacaabo guddigii farsamada.
Dad badan ayaa qaba in sababta dib u dhaca ku keenay habsami u socodka howlihii dhismaha maamulka labada gobol lagu tilmaami karo mooshinka xildhibaanno ka tirsan baar lamaanka ka keeneen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Max'uud, kaa oo sababay in gollayaasha dowladda mashuul ku noqdaan muran siyaasadeedka ka dhax aloosan baarlamaanka iyo madaxtooyada,
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamu ud iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaarey magaalada Abu Dhabi ee xarunta dalka Isutagga Imaaraad ka Carabta, halkaa oo ay uga bilaabatey booqasho rasmi ah.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa martiqaad rasmi ah ka heley Madaxweynaha Imaaraad ka Carabta Khalifa bin Zayed Al Nahyan, waxaana maalinta maanta bilaabanaya kulamo kala duwan oo la xiriira xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in booqashadan ay ka tarjumeyso xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal, iyo doorka wanaagsan ee ay mar walba Dowlad da Imaaraadka Carabta ka cayaareyso arrimaha Soomaaliya.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah Wasiirka Arrimaha Dibedda Cabdisalaam Had liye Cumar, Wasiirka Gaadiidka Dhulka iyo Duulista Hawada, Cali Axmed Jaamac (Jangeli) iyo mas’uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta
BAARLAMAANKA SOOMAALIYA OO SHALAY KA DOODAYA SHARCI SAAMEYN KU YEELANAYA SHAQAALAHA SHISHEEYAHA EE DALKA KA HOWLGALA
Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay u fariistay ka doodista sharciga shaqaalaha ajna-biga ah ee dalka ku sugan, iyadoo xildhibaanadu ay halkaasi ka dhiibanayaan aragtiyahooda ku aadan shirkaasi.
Kulanka Golaha oo shalay ayaa mid ku bilowday jawi degan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go’aano saameyn ku yeelanaya shaqaalaha shisheeyaha ah ee qarka u saaran inuuba la wareego goobihii ugu muhiimsanaa dalka, taasi oo ay hormuud ka yihiin shirkadaha Turkiga laga lee-yahay.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ah habdhowraha Golaha Baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay in sharcigaan ay soo diyaarisay Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, isla markaana u soo gudbisay Golaha Baarlamaanka si uu ansixiyo.
Dhinaca kale sharcigaan ku saabsan shaqaalaha ajaanibta ah ayaa haddii uu dhaqan galo waxaa fursad helaya shaqaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda xoogsatada ah oo howlahoodii ay dowladdu ku wareejisay shirkado shisheeye.
MAAMULKA DEGMADA WARSHEIKH OO KA WARBIXIYAY XAALADA DEGMADAASI
Maamulka Degmada Warsheikh oo ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ka warbixiyay xaaladaha dhinaca amniga iyo mid nololeed ee dadka ku dhaqan degmadaasi.
Gudoomiyaha degmada Warsheikh Axmed Xuseen Axmed (Shiid) oo wareysi dheer ah siiyay warbaahinta ayaa faah faahin ka bixiyay xaalada iminka ka jirta degmadaasi iyo waliba dadaalo lagu heshiisiinayay beelo dhawaan ku dagaalamay duleedka degmadaasi.
AHLU SUNNA OO KU HANJABTAY INAY XIRAYAAN MASUULIYIINTA GALMUDUG, HADII AY YIMAADAAN DEEGANADA AHLU SUNNA
Masuuliyiinta Maamulka Ahlu Sunna Gobolada Dhexe, ayaa ku hanjabay inay xirayaan mas uuliyiinta ka tirsan Maamulka Galmudug, haddii ay yimaadaan deeganada uu ka taliyo Maamulka Ahlu Sunna.
Hadalkaan ayaa waxaa sheegay Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Ahlu Sunna Xasan Maxamuud Warsame (Gaboobe) oo la hadlay Idaacada Mustaqbal ee Magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay masuulkaan deeganada ay maamulaan inaysan imaan karin qof xil ka haysa Galmudug.
Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Ahlu Sunna Xasan Maxamuud, ayaa sheegay hal waddo kaliya inay ku imaan karaan Masuuliyiinta Galmudug ee xilalka ka haysa Maamulkaasi, waddadaasi oo uu ku sheegay inay tahay inay soo booqan karaan kaliya reerahooda, balse arimo ku tacaluqa siyaasad inaysan u imaan karin.
Wuxuu ku goodiyay inay xiri doonaan masuulkii ka tirsan Galmudug oo isaga oo xil haaya yimaada deeganada Maamulka Ahlu Sunna, isaga oo tunka ku wata arimo Siyaasadeed.
Madaxweyne Ku xigeenka Ahlu Sunna ayaa sheegay inay yihiin Maamul dhameystiran oo ka shaqeeya deeganada Gobolada Dhexe, shacabkana ugu adeegaya si daacadnimo ah.
C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa ku dhawaaqay habe en hore golaha Wasiirada Maamulkiisa, ka dib waqti badan oo uu ku mashquulsanaa soo xulista xubnaha Maamulkiisa ka mid noqonaya.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa diiday ka mid noqoshada Maamulka Galmudug, xubnaha he shiiska Khamiistii ku saxiixay Cadaado ayeey Ahlu Sunna ku sheegeeninaysan ma talin Maamul kooda.
TALIYE SARE KANA SOCDA DALALKA CIIDAMADA U SOO DIRAY SOOMAALIYA OO MARKII UGU HOREYSAY KISMAAYO KA DEGAY ..
Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa loo adkeeyay, iyadoo fara badan la soo dhigay wad dooyinka, magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda, iyadoo ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa AMISOM ay xoojiyeen kontrolka dhaqdhaqaaqa magaaladaasi, ka dib markii uu halkaasi gaa ray taliye ka socda dowladaha ciidamada geeyay Soomaaliya.
Taliyaha ciidamada Dowladda Kenya Lt General Leonard Ngondi ayaa markii ugu horeysay gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, iyadoo halkaasi ku soo dhoweeyeen madax isugu jirta maamulka Jubaland saraakiisha AMISOM, isla markaana waxa uu taliyaha ku-lamo duwan la qaatay madaxda maamulka Jubaland.
Kulan gaar ah oo dhex maray Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Lt General Leonard Ngondi ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dh-inac.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ka warbixiyay socdaalka Taliyaha ugu sareeya ciida mada Kenya waxa uu sheegay inay ka wadahadleen arrimo ay ka mid yihiin iskaashi dhex mara labada dhinac, gaar ahaan dhinacyada ammaanka, la dagaalanka argagixisada iyo taageerada ciid amada maamulka Jubaland.
Dhinaca kale Lt General Leon-ard Ngondi ayaa u gudbay xarunta ugu weyn ee ciidamada AMISOM ku leeyihiin magaalada Kismaayo, halkaasi oo uu salaan kaga qaatay ciidamadii halkaasi ku sugnaa.
Waa markii ugu horeysay oo Taliye sare kana socda dalalka ciidamada geeyay Soomaaliya uu yimaado, iyadoo horay Madaxweynaha Uganda Yuweri Musafi uu ka degay magaalada Muq disho, halkaasi oo uu kulamo kula qaatay madax iyo saraakiil ka tirsan Dowladda iyo kuwa AMISOM.
SHABAAB OO XUKUN KU FULIYAY NIN LAGU EEDEEYAY INUU KUFSADAY HAWEENAY
Ururka Al Shabaab ayaa xukun waxa ay ku fuliyeen nin lagu eedeeyay inuu kufsaday hawe enay dadka deegaanka aheyd, waxaana xukunkaan uu ka dhacay darraad galab fagaaro ku yaallo deegaanka Galhareeri ee Gobolka Galgaduud.
Maxkamada Al Shabaab ee deeganaka Galhareeri ayaa ninkaan waxa ay ku eedeysay inuu kufsaday haweenay ka mid aheyd dadka deegaanka, kadibna dacwadiisa lasoo gaarsiiyay maxk amada cadeymo rasmi ahna loo helay.
Ninka xukunka lagu fuliyay ayaa lagu magacaabaa Saciid Cali Rooble, waxaana lagu dhuft ay 100 Karbaash, maadaama sida ay sheegeen Shabaabka ninkaan uusan horay guur u soo marin.
Qaadiga maxkamada Shabaab ee Galhareeri, ayaa sheegay xukunkaan inuu yahay xadu Zinaa, maadaama ninkaan uu ku kacay fal Zino ah, maxkamada horteedana la keenay cadeymo.
Bulsho badan ayaa daawanaysay goobta ninkaan xukunka lagula fuliyay ee deegaanka Galhareeri, ka dib markii Shabaabka ay dadka ay ku wargeliyeen inay kasoo qaybgalaan xukunk aan oo ka dhacaya Fagaaro weyn oo ku yaallo deegaanka Galhareeri.
MADAXWEYNAHA KOONFUR GALBEED OO GAARAY MAGAALADA MARKA
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa gaaray shalay Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Ammaanka Magaalada Marka ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana amniga iska kaashaday ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom.
Afhayeenka Maamulka Koonfur Galbeed, C/qaadir Nadaara ayaa sheegay in Madaxwey naha Koonfur Galbeed uu geeyay Magaaladaasi Maamulka cusub ee Degmada Marka.
Shariif Xasan ayaa waayahan wuxuu socdaal ku maraayay deegaano iyo Degmooyin ka tir san Gobolada uu ka taliyo.
MAXKAMAD KU TAALA DALKA MAREYKANKA OO 15 SANO KU XUKUNTAY NIN SOOMAALI AH
Maxkamad Federaal ah oo ku taallo Magaalada Miami Gobolka Florida ee dalka Mareyka nka ayaa xukun gaaraya 15-sano waxa ay ku xukuntay muwaadin Soomaaliyeed, ka dib markii lagu helay kiis la xiriira inuu lacag u diray Ururka Shabaab.
Ninkan Maxkamada ay xukuntay ayaa lagu magacaabaa Mohamed Hussien Seed, wax aana soo eedeeyay FBI-da Mareykanka oo sheegay Mohamed inuu dhaqaalo u diri jiray Ururka Shabaab oo ka mid ah Ururada Islaamiyinta ee Al-Qaeda ka tirsan.
Eedeysanaha la xukumay ayaa da’diisa waxa ay tahay 27 sano jir, wuxuuna deegaan ahaan deganaan jiray dalka Kenya, balse wuxuu ku noolaa sanadihii dambe dalka Mareykanka.
Muddo ayeey FBI-da Ninkaan ku daba jireen oo baaritaan ay ku hayeen, ugu dambeyna waxaa lagu helay kiisas la xiriira inuu dhaqaale iyo qalab intaba u diri jiray Ururka Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalama.
Dacwad oogayaasha Mohamed, ayaa sheegay inuu diray lacag dhan 11,000 oo Dollar, wuxuuna u diray lacagtaasi Ururka Al Shabaab, sida ay maxkamada ka hor sheegeen dacwad oogayaasha Mohamed.
Kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee amniga Qaranka, John P. Carlin, xeer ilaaliyaha magaa lada Florida iyo wakiilka gaaarka ah ee hay’ada FBI ee gobolka Miami, ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay xukunka 15-ka sano ee Ninkaan Soomaaliga ahlagu riday.
Mohamed ayaa qirtay mid ka mid ah eedeymaha loo soo jeediyay oo aheyd in Bishii May 28 keeda ee sanadkaan inuu lacag u diray Shabaab, sidoo kalena Shabaab uu u qaabilsanaa qorista Dhalinyarada ku biireysa.
HOOYO SOMALIYEED OO LA SOO TAAGAY MAXKAMAD KU TAALA DALKA CANADA, IYADOO LAGU EEDEEYAY IN CARRUUR LA SOO BAXSATAY
Anisa Mohamed Ibrahim oo deganeyd Magaalada Manchester Ee Wadanka Britain, ayaa sanadkii 2010-ka waxay soo degtay Magaalada Toronto, xilli ay la soo carartay laba wiil ay dha shay. Haweeneydan ayaa magac aan midkeeda ahayn isaga dhiibtay Canada.
Booliska Manchester iyo Toronto, ayaa iska kaashaday soo qabashada haweeneydaasi, taasoo ugu dambeen bartamihii bishan lagu xiray Magaalada Himilton.
Booliska Toronto, ayaa sheegay inay soo idlaatay muddo shan sano ah oo haweeneydaasi la baadigoobaayay, markii ay helayn xog ku aadan inay ku sugan tahay Magaalada Himilton.
Jimcihii, ayaa waxay ka soo muuqatay Maxkamadda Magaalada Himilton, waxaana lagu soo oogay in carruurta kala soo baxsatay Britain, xilli aanu waxba kala socon aabaha dhalay, oo lagu magacaabo Abdul Abubakar.
Maxkamadda, ayaa kiiska hooyadan Soomaaliyeed dib u dhigtay illaa 11-ka bisha soo socoto ee September, markaasoo markale la dhageysan doono eedeymaha loo haysto.
Bayaan uu soo saaray Marine Corps Systems Command, ayaa lagu sheegay muddo laba sano ah in aabuhu uu doon doonaayay carruurtiisa, sidoo kalana uu la xiriiray hooyadood, isago ona ka codsaday inay u soo sheegto halka ay ku sugan yihiin, bal si uu u ogaado waxa ay wiilashu ku sugan yihiin.
Wiilasha oo 10 jir iyo sideed sano jir ah, ayaa laga qaaday hooyadan, waxaana la geeyay xarumaha carruurta lagu xannaaneeyo. Haddii Maxkamaddu ay eedeymahaasi ku hesho Anisa, ayaa waxaa suurta gal ah iyada iyo laba wiilba in dib loogu celiyo Boqortooyada Britain.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Magaalada Himilton oo darraad soo buuxiyay Maxkamadda, ayaa waxay muujiyen sida ay u garab taagan yihiin hooyadaasi. Sahra Farah oo ka mid ah Jaali yadda, ayaa sheegtay inay garab jooggaan Anisa.
CAWAD: MOOSHINKA LAGA KEENAY MADAXWEYNAHA WUU KA DUWAN YAHAY MOOSHINNADII HORE
Guddoomiye ku Xigeenka labaad ee Baarlamaanka FS, Mahad C/lla Cawad ayaa ka hadlay mooshinka dhanka ka ah Madaxweynaha Soomaaliya, kaasoo horraantii bishan ay gudbiyeen 93-Xildhibaan oo baarlam-aanka Soomaaliya ka tirsan.
Cawad ayaa sheegay in Mooshinku uu yaallo xafiiska Guddoonka Baarlamaanka Sooma aliya isla markaana aan wali la geyn Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo xusay in mooshinka laga keenay Madaxweynaha uu ka duwan yahay Mooshinnadii horay looga keenay xukuumadda.
"Mooshinka Madaxweynaha ka dhanka ah, xildhibaanno baarlamaanka ka mid ah ayaa keenay, xafiiska guddoonka baarlamaanka ayuuna yaallaa, Baarlamaanka weli lama horkeenin, sidaas in la ogaado ayaan doonaynaa,” ayuu yiri Cawad oo la hadlayay Warbaahinta.
Sidoo kale, Guddoomiye ku xigeenku wuxuu intaas ku daray in eedeymaha loo jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya loo baahan yahay in dariiq kale ay soo marto, isla markaana Max-ka mad ay xaqiijiso, lana soo caddeeyo eedeymaha inay jiraan iyo in kale.
"Waxaan rabaa inaan caddeeyo in mooshikan uu ka duwan yahay kuwii horay looga keeni jiray xukuumadihii dalka soo maray. Marka waxay u baahan tahay in lasoo maro dariiq kale sida in maxkamad lasoo mariyo si eeddaha ku xusan loo xaqiijiyo, waayo ma ahan mooshin caadi ah,” ayuu hadalkiisa ku daray Cawad.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Mooshinkan soo diyaariyay ayaa sheegay in goor hore Mosh inka loo gudbiyay Maxkamadda sare ee dalka, maadaama aanay jirin Maxkamadii Dastuuriga ah oo go’aan ka gaari lahayd.
Dhanka kale, Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo wada tashiyo ah oo u badan kuwo xal looga gaarayo mooshinkan ka dhanka ah Madaxweynaha Somalia la qaatay qaar ka mid ah xildhibaannada Mooshinka keenay, inkastoo aysan weli wax natiijo ah kasoo bixin.
Ugu dambeyn, Illaa bishan 12-keedii oo ahayd markii Mooshinkan la gudbiyay waxaa soo baxayay walaacyo kala duwan oo ku aaddan sida ay xaaladda dalka ku dambeynayso, iyadoo Beesha Caalamka ay codsatay in si hoose loo dhameeyo arrintan.
HAY’AD LA-DIRIRTA MUSUQ-MAASUQA OO KULAN KU QABATAY MAGAALADA MUQDISHO ..
Hay'adda Markhaati oo ka Shaqeysa Islaxisaabtanka ayaa Maalintii Isniinta Magaalada Mu qdisho ku qabtay kulan looga hadlayay la dagaallanka Musuq-maasuqa; kaasoo ay ka qayb-gal een qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed sida; Aqoonyahannada,Siyaasiyiinta iyo Bul-shada reydka sidoo kale xubno ka socda Dawladda Soomaaliya
Kulanka ayaa waxaa xubnihii ka Qayb-galay ka mid ahaa; Xildhibaan Faysal Cumar oo ka Tirsan Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Guddoomiyaha Xisbiga Midnimada & Dimuqraadiyada, Salaad Cali Jeele, Guddoomiyaha Xisbiga Kulan, Maxyadiin Maxamed Xaaji iyo Abshir Maxamed oo isagana ah saxafi Waayo arag ah. iyagoo ka hadlay Arrimaha dalka ka jiro iyo sidii looga Gudbi lahaa; Waxayna ugu Dambeyn ka Jawaabeen Su’aalo ay dadweynuhu weyd-iinayeen.
Sidoo kale, kasoo Qaybgalayaasha Kulaka Waxay iskuraaceen baahida loo Qabo in la isla-xisaabtamo; iyagoo ugu yeeray Dowladda Federaalka Soomaaliya inay Xoojisa Dadaalka ka horta ga iyo Ladagaalanka Musuqmaasuqa.
GUDDIGA DIFAACA EE BAARLAMAANKA IYO WAFDI LA SOCDA OO GAARAY MAGAALADA MARKA
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Xuseen Carab Ciise iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasi oo ay kula kulmi doonaan maamulka iyo qeybaha bulshada ee Marka ku nool.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in u jeedada socdaalkooda la xiriirto sidii ay ugu kuurgali lahayeen dhacdo dhawaan halkaasi ka dhacday oo ahayd fal dil ah oo lagu soo eede eyay cidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, kaasi oo ahaa inay dileen dad xaflad aroos ah ku sugnaa.’
"Shirkii Guddiga difaaca baarlamaanka uu la galay Midowga Afrika iyo AMISOM ayaa ahaa in aan kormeer ku sameyno goobaha ay howlgallada ka sameeyeen, waxa ay qeyb ka tahay gud ashada waajibaadka guddiga difaaca loo idmaday, marka nasiib wanaag waxaa socdaalka igu wehliya Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul insaanka iyo Madaxweynaha Maamulka Koonfur galb eed ee Soomaaliya, marka waxaan ka bilaabaynaa inaan ogaano sidii ay u dhacday falkii lagu dilay dad rayid ah oo Marka ku sugnaa” ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab.
Xildhibaanka ayaa xusay inta ay socdaalka ku joogaan ay kulamo gaar gaar ah la qaadan doonaan qeybaha bulshada, iyadoo la filayo in wafdi ka socda Midowga Afrika ay gaaraan Marka.
Dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah oo ka tagtay xeebaha Libya kuna socotay Talyaa niga ayaa quustay. Mas’uuliyiinta waxa ay ka cabsanayaan in qiyaastii 200 oo qof ay geeriryo odeen inkasta oo tirada rasmiga ah aan la ogeyn.
Saraakiisha waxay sheegeen in ciidamada ilaalada xeebaha Libya ay soo bad-baadiyeen 200 oo qof oo kale oo saarnaa doontan ku quustay badda magaalo xeebeedka Zuwara, goor dam be oo maalintii khamiista ahayd.
Mid ka mid ah dadka doonta saarnaa oo bad-baaday, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in doontu ay ahayd mid ku sugan xaalad aad u liidata markii ay dhaqaaqeysay
SADDEX WARIYE OO AL-JAZEERA U SHAQEEYA OO LA XUKUMAY
Maxkamad dalka Masar ayaa ku xukuntay saddex wariyayaal oo ka tirsan Aljazeera TV sad dex sanno oo xarig ah.
Dacwada Maxamed Fahmy, Peter Greste iyo Baher Maxamed ayaa lagu helay danbi ah in ay shee-geen war qalad ah iyo inay caa-winayeen ururka Akhwaan Muslimi-inyta oo hadda la mam nuucay.
Baher Maxamed ayaa lagu xukumay lix bilood oo xarig ah oo dhe-eraad ah.Xukunkaan ayaa dhacay shalay oo Sabti ah, kadib markii Wariyeyaashaan ay kasoo muuqdeen Maxkamada
MO FARAH OO MAR KALE KU GUULEYSTAY ORODKA 5000 MITIR EE TARTANKA CIYAARAHA FUDUD EE BEIJING
Mo Farah ayaa mar kale dhigay taariikh, isagoo ku guuleystay orodka 5000 mitir, waxaa todobaadkii hore ku guuleystay Orodka 10,000 mitir.
Orodyahankan ayaa wali sii wata guulihiisa is dabajooggaa, isagoo sanadihii 2012 ee Tar tankii Olimbikada iyo Tartankii ciyaaraha fudud ee Moscow ka dhacay sanadkii 2013 ku guuleystay labo biladood.
Mo Farah ayaa waxaa shaki la gelinayay sida uu tartanka 5000 mitir ugu guuleysan karo, maadaama xafiiltan aad u adag uu kala dhaxeeyay orodyahano u dhashay dalalka Kenya iyo Itoobiya.
Orodyahanka u dhashay Kenya Caleb Ndiku ayaa tartankii ciyaarihii Commonwealth ku guul eystay orodka 5000 mitir, iyadoo Ndiku uu hogaanka qabtay wareegii labaad ee tartanka, waxaase dhacday in Mo Farah uu la soo baxay tallaabadiisa dheereeyd, iyadoo wareegii ugu dambeeyay uu ka hor maray.
Orodyahankan asalkiisa Soomaaliga yahay, balse heysta dhalashada Britishka ayaa shan jeer qaaday bilada dahabka, waxaana uu horay u qaaday Orodada 5-ta kun iyo 10-ka kun ee Orodka.
Markii uu ku guuleystay orodka 5000 mitir ayuu muujiyay calaamad ah inuu mar kale filan ayo in canug loo dhalo, ka dib markii uu suulkiisa nuugay.
MARKAB LAGA LEEYAHAY DALKA IRAN OO KA BAXSADAY DABLEY SOOMAALIYEED OO AFDUUB KU HAYSTAY
Markab laga leeyahay Dalka Iiraan iyo 19 Shaqaale ah oo saarnaa ayaa ka baxsaday gac anta kalluume-ysato Soomaaliyeed oo Afduub ahaan ugu haystay deegaanka Ceel Huur ee Gobo lka Mudug, ka dib markii ay shan bilood haysteen.
Markabkan oo ah nooca kalluumeysiga ayaa lagu haystay kalluumeysi sharci darro ah oo xe ebaha Soomaaliya uu ka sameynayay, waxaana gacanta lagu dhigay 23-kii Maarso, 2015-ka.
Sida uu sheegay Ruux lagu magacaabo, John Steed oo ka tirsan Ururka lagu magacaabo Oceans Beyond Piracy, Naaquudaha markabka ayaa ka faa’iideystay diyaarad Helicopter ah soo dulmartay markabka taasoo keentey in kooxihii af-duubka u haystay markabka inay ka kala cara raan.
Naaquudaha Markabka ayaa Baroorsinka u furay markabka, ka dibna goobta si dhaqso ah uga baxday, iyadoo tani ay noqonayso markii ugu horreysay oo markab afduub loo haystay uu ka baxsado dableydii haysatay.
Ugu dambeyn, wararka ayaa sheegaya in markabka Doomo lagu baacsaday ka dib markii uu baxsaday, balse markabka wuxuu gabbaad ka dhigtay markab ka mid ah kuwa NATO ee Xeeb aha jooga, kuwaasoo siiyey cunno iyo raashiin shaqaalaha markabka.
DAD LOO XIR-XIRAY DHIMASHADA MUHAAJIRIINTA YURUB
Booliiska dalka Austria ayaa Sabtidii soo saaray saddex caruur ah oo fuuq baxay, kuwaas oo ku jiray gaari van ah oo ay si ciriir ah ula saarnaayeen 26 qof oo u kala dashay Suuriya iyo dalal ka ku yaalla gobolka koonfurbari Asia. Arrintan ayaa ka dhacday meel u dhow xadka dalka Jarma lka. Yurub ayaa waxay la kulmaysaa dhibaatooyin dhinaca bani’aadminimada ah oo aad u daran, kuwaas oo ay la kulantay ilaa dagaalkii labaad ee adduunka.
Dhinaca kale, afar nin uu lagu humay inay ku lug lahaayeen dhimashada 71 muhaajir oo Khamiistii laga helay gaari xamuul ah oo ku socdaalayey dhalka Austria gudihiisa ayaa waxa lagu hayaa maxkamad ku taalla dalka Hungry.
Sidoo kale, Sabtidii shalay, maamulka dalka Libya ayaa sheegay in saddex qof loo xiray iyada oo lagaga shakiyey inay direen dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah, taas oo Khamiistii ku degtay xeebaha badda Mediterranean-ka ee dalka Talyaaniga. Sarakiisha ayaa sheegay in ilaa 200 oo qof ay hafteen.
WAX KA BARO TAARIIKHDA DALKA KUWAIT.
Dalka Kuwait oo la yiraahdo jamhuuriyadda boqortooyadda dadka ee Kuwait waxaa uu ku yaala galbeedka qaaradda Asia waxaana uu dhan ka saran yahay gacan biyoodka Persia.
Dalkaan waxaa uu xaduud dhuleed la leeyahay wadamada Ciraaq iyo Sacuudiga.
Tirada dadka u dhashay wadankaan waxaa lagu qiyaasaa 4.1 million oo ruux.Dadkaas 1.2 million oo ka mid ah waa dad asal ahaan u dha shay dalka Kuwait halka 2.8 mill iona ay yihiin dad soo galooti ah. Tirokoob lasoo saaray sanadkii hore 60% dadka Kuwait waa Carab halka dadka madow ee dhalashada Kuwait qaadatayna waxay bulshada wadankaas ka yihiin qiyaa stii 1% waxaana gaadiidku isku dhaafaan dhanka midig Af Carabiga ayaana ah luuqada rasmiga ah ee dalka looga hadlo.
Caasimada wadanka waxaa la yiraahdaa Kuwait city calanka waddankuna waxaa uu ka kooban yahay 4 midab oo kala ah Cagaar, Cadaan, Casaan ama gaduud qafiif ah iyo in yar oo ma dow ah lacagta wadanka laga isticmaalana waxaa la yirahdaa Kuwaiti Dinar.
Taariikhyahanadu waxay sheegaan in dalkaan oo la aamin sanyahay in la degay qarniyo ka hor waxaa uu lagu dhawaaqay inuu ka go’ay imaaradii Xasaa sanadkii 1752,kii
Mar kale sanadkii 1913 ayaa dalkaan looga dhawaaqay inay madax banaanideeda ka qaadatay dawladii Cusmaaniyiinta hase ahaatee 19 June 1961 ayaa looga dhawaaqay boqortooyada dalka asi hadda ka jirta.
Dhaqaalo ahaan wadankaan waxaa uu ka mid yahay waddamada soo saara shidaalka ee haddana dibbadda u dhoofiya waana dalka 6,aad ee shidaalka dhaqaalaha ugu badan ka hela.
Shidaalka oo dalkaan laga helay Sodomeeyadii waxaa uu dibbadda u dhoofiyaa boqolaal billion oo barmiil oo shidaal ah sannadkiiba waxaana ku yaala ceelka labaad ee shidaalka ugu badan laga soo saaro dunnida.
Dalkaan Kuwait waxaa uu xubin ka yahay ururo caalami ah iyo kuwo heer gobol ah sida Uru rka Shirweynaha Islamka, Jaamacadda Carabta, Q,M wadamada gacanka, ururka wadamada shid aalka dibbadda u dhoofiya ee OPEC la yiraahdo iyo ururo kale.
Dhacdooyinka dalkaan laga xasuusto waxaa ka mid ah duulaankii dawladii Ciraaq waddan kaan ku qaaday sanadkii 1990 socdayna illaa 1991,kii.
Dagaalkaas in ka badankun ruux oo rayid Kuwaydiyiin ah ayaa la aaminsanyahay inay ku naf waayeen illaa haddana 600 oo kale ayaa raqdooda iyo ruuxooda la la’yahay.
Ciraaqiyiintu inta dagaalkaasi socday waxay gubeen ceelal Shid aal oo tira badnaa. Dalka diinta rasmiga ah waa Islam Suniyiin u badan inkastoo ay jiraan tiro yar oo Shiico ah.
Dhaqan ahaan dadka Kuwait waxay ku dhaqan yihiin dadyowga Carbeed gaar ahaan dadka waddanka Baxreyn.
Dalkaan waa kan kaliya ee wadamada gacanka ee oggol in dhaqankooda hab masrixiyeed u soo bandhiga
Raggu waxay xirtaan qamiisyo iyo cimaamado halka dumarkuna ay xijaabtaan timirta ayaana ka mid ah cunadda loogu jecely ahay dalkaasi.
W/D:-BURHAN DINI FARAH TELEPHONE: +252-615108019